M6.9 Now( 7.2)- Baja California, Mexico – 2010 April 04 22:40:39 UTC | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » U.S. News » M6.9 Now( 7.2)- Baja California, Mexico – 2010 April 04 22:40:39 UTC
M6.9 Now( 7.2)- Baja California, Mexico – 2010 April 04 22:40:39 UTC
Posted by kai on Apr 4, 2010 in U.S. News |4comments
M6.9 - Baja California Mexico - 2010 April 04 22:40:39 UTC
A USGS map of the location of the quake in Mexico.
အခုတင်လှုပ်တာပါ။ ရှေ့ နောက်ခါသွားတာဖြစ်ပြီး အပေါ်အောက် ဟုတ်ပုံမရတာမို့ ဆုနမိတွေဘာတွေ စိုးရိမ်စရာရှိမယ် မထင်မိပါ။
ငလျှင်ဗဟိုက မက်စီကိုထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့ မက်စီကိုနယ်စပ်နားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တခြားသတင်းတွေ မတက်သေးပါကြောင်း..နဲ့ ခုတလော မြေကြီးထဲအိပ်နေတဲ့ ကာလနဂါး စိတ်ဆိုးနေသလားမသိ..ခဏခဏပျင်းကြောဆန့် နေပါကြောင်း..
ငလျှင်အကြောင်း သိတာလေးတွေဖြစ်တာလေးတွေ အောက်ကကွန်မန့် မှာ သတင်းရေးပေးစေလိုပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဆန်ဒီယေးဂိုဖက်(ငလျှင်ဗဟိုနဲ့ နီးတဲ့မြို့ )မှာ ဗမာတွေ ၃-၄ထောင်လောက်နေတာမို့ သတင်းမရသေးသော်လည်း ပြသနာရှိပုံမရပါဘူး။ ဖုန်းဆက်မေးကြည့်သလောက်ပါ။
ကယ်လီဖိုးနီးယားနေ မိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျီုးသူငယ်ချင်းတွေအတွက် အထူးတလည်စိုးရိမ်စရာမရှိပါကြောင်းလည်း တခြားနိုင်ငံ၊ ပြည်နယ်နေ ဗမာတွေကိုသတင်းပေးလိုပါတယ်။
M6.9 – Baja California, Mexico – 2010 April 04 22:40:39 UTC
+32° 5′ 35.16″, -115° 14′ 56.76″
that was so scary, i was fascebooking it while it happened… =/
it was so scary i am in los angeles and it seemed to go on forever! 60 seconds I heard. I facebooked it right after it happened. =/
haha i kno i did 2…ima add you now lol.
နည်းနည်းချင်း ထပ်လှုပ်နေပုံရပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးတွက်ချက်အရ ၇.၂ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့..။